Paompy Solika Asyrta
Pinion kodiarana satro-boninahitra
Esorina ny herinaratra
Ny NITOYO dia ekipa kely nisy olona 5 tamin'ny 2000, any Chengdu, Sichuan. Taorian'ny ezaka nataontsika dia nanjary sehatra fanompoana serivisy fijanonana tokana mihoatra ny 60 izy izao, niara-niasa tamin'ny firenena / faritra 180 ary nanompo mpanjifa 400 mahery.
Hatramin'ny 2000 ~
Tamin'ny taona 2000, ny ekipa mpanorina anay dia nanomboka ny orinasa fanondranana fiara miaraka amina fitsidihana sy fanadihadiana marobe saika ireo orinasa any Sina ary nahita ireo ozinina mety.
2000-2005 Ny fanitarana manerana ny tsenan'i Amerika atsimo
Taorian'ny fanandramana sy fanovana maro dia vitantsika ny nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa ny tsenan'i Amerika atsimo indrindra any Paraguay.
2000-2010 Ny nahaterahan'ny zanakay NITOYO & UBZ
Nandritra ny ezaka nandritra ny 10 taona dia fantatra amin'ny anarana hoe NITOYO & UBZ manerantany isika, mpanjifa maro no matoky ny kalitao sy serivisy NITOYO. Ankoatr'izay, toy ny mampiseho ny sary famantarana anay, manolo-tena izahay hanome vokatra tsara hiarovana ny fiara mitondra fiara. Miorina amin'izany, manana masoivoho any amin'ny firenena maro isika ohatra any Paraguay, Madagascar.
2011 Fampandrosoana samihafa
Miaraka amin'ny fivelaran'ny Internet, manomboka manitatra ny sehatra an-tserasera izahay, ahitana ny fivarotana fiantsonana iraisam-pirenena Alibaba sy ny tranonkalantsika ofisialy https://nitoyoauto.com/, facebook, link-in, youtube.
Fitomboana iraisam-pirenena 2012-2019
Noho ny fomba fanamboaranay teo aloha dia nanitatra tsikelikely tsena marobe sy malaza any Afrika, Amerika atsimo, atsinanana afovoany ary atsinanan'i Azia atsimo atsinanana izahay.
Tamin'ny taona 2013 dia nanaiky tamim-pahombiazana ny tsenan'i Afrika izahay ary nahazo ny baiko mitentina 1.000.000 USD.
Tamin'ny taona 2015 dia nahafaly anay ny naha-iray izay natokisan'ny namana maro an'i Azia atsimo atsinanana.
Tamin'ny 2017 izahay dia nanatrika ny Expo Latina sy Amerika Aapex teo anelanelan'ny volana Jolay sy novambra. Amin'ity taona ity isika dia mahazo ny lazanay amin'ireo tsena roa ireo satria voaporofo ny baiko – 1,500,000 USD.
Tamin'ny taona 2018-2019 dia nanatrika fampirantiana maro dia maro izahay, naondrana tany amin'ny firenena 150 mahery.
2021 NITOYO nivadika 21 taona
Ny vinan'ny vondrona dia tena tsara. Hatramin'ny taona 2000, notazoninay ny fikasana tany am-boalohany: hiantohana fa afaka mividy am-pahatokisana ny mpanjifa ary afaka mampiasa toky ny mpanjifa!
Ho an'ny fanadihadiana momba ny vokatray na ny pricelist, azafady mba apetraho aminay ny mailakao ary hifandray ao anatin'ny 24 ora izahay.